Idozi Ndakọrịta Nsogbu maka Xbox
Media Ndakọrịta Solutions Idozi Ndakọrịta Issues maka All Formats, Devices & Ọzọ
Category: Video egwuregwu console
Lastest Ụbọchị mwepụta:
Fun Facts banyere Xbox
The mbụ Xbox na ngwaọrụ bụ nke mbụ video egwuregwu console awa site ihe American ụlọ ọrụ mgbe Atari Jaguar kwụsịrị ahịa na 1996.
Dị ka a Ịgba Cha Cha ika kere site Microsoft, Xbox na-agụnye a usoro nke video egwuregwu consoles nke isii asatọ ọgbọ. Ọ na-enye egwuregwu ngwa, nkwanye ọrụ na online ọrụ, mara dị ka Xbox Live. Ika akpa ẹkenam on Novermber 15, 2001 na United States, na egbe nke mbụ Xbox console. The anọchi ka Xbox console bụ Xbox 360 na Xbox One, nke na-ewu ewu na n'ụwa nile.
The Xbox 360 a na-ewere dị ka akụkụ nke asaa ọgbọ nke video egwuregwu consoles, ọnụ na Sony si PlayStation 3 na Nintendo si Wii. Ọ na atụmatụ Xbox Live nke ohere ọrụ na-egwu egwuregwu online; download egwuregwu na egwuregwu demos; Ịzụ na iyi music, na telivishọn, na fim site na Xbox Music na Xbox Video portals; na ohere ọdịnaya ndị ọzọ ọrụ site media gụgharia ngwa.
The Xbox Otu bụ nọchiri ka Xbox 360, nke a na-ewere dị ka akụkụ nke asatọ ọgbọ nke video egwuregwu consoles, ọnụ na Sony si PlayStation 4 na Nintendo si Wii The ọhụrụ Ịgba Cha Cha arụmọrụ na-agụnye onye expaned Xbox Live ọrụ, enwekwukwa Kinect arụmọrụ, ígwé ojii Mgbakọ, ike idekọ ma na-eso video isi ihe ndị sitere gameplay, na nkwado maka ndụ gụgharia gameplay online.
Dị ka ọ na eze na-ekwu, ma Xbox 360 na Xbox One akwado a dịgasị iche iche nke video ọdịnaya. Ma, ị pụrụ mgbe mgbe nwere nsogbu na-akpọ gị mgbasa ozi faịlụ. Ugbu a na-agbaso isiokwu n'okpuru dozie nsogbu ndị a.
Olee otú Play MP4 Files na Xbox 360
Olee otú Play Videos on Xbox 360
Olee otú Play MKV Files na Xbox One
Olee otú Play AVI Files na Xbox 360
Olee otú Play MP4 Files na Xbox One
Xbox One akwado Formats
Olee otú Play DVD na Xbox DVD Player
Get a Great Xbox 360 Video Ntụgharị
Ò Kwekọrọ n'Ozizi Facts na Xbox
Na ọtụtụ mmelite, nkwado maka wider nso nke formats e kwukwara na Xbox. Otú ọ dị, dakọtara media faịlụ ndị ka nnọọ nta. Ugbu a ego niile na-akwado formats na iji ndepụta n'okpuru.
Akwado Media Formats
MKV (na-abịa mbubreyo 2014)
Search Solutions niile gị na Ndakọrịta Nsogbu
Hot Ngwaọrụ Issues
Camcorder Kọrọ Video File
DivX-koodu Movie File
Lee More >> Lee Naa >>
iPhone 6, 6 gbakwunyere, 5s na ndị ọzọ
iPad 4, Ikuku, Obere na ndị ọzọ
Samsung Galaxy S5, S4 & n'okpuru
iPod aka 5 / nano / kpochapụwo & ọzọ
Samsung Galaxy Cheta
Samsung Galaxy Rịba ama 4/3 & ọzọ
Kacha ọhụrụ nke Topic
Asaa nke kasị mma MP4 ka DVD converters
Olee otú Ọkụ iMovie Projects ka DVD on iDVD
Olee otú Iji Ọkụ MP4 Iji DVD Iji Wondershare DVD Creator
Na-ewu ewu Ugbu a
Nwere ụfọdụ MPEG-4, MP4 faịlụ-apụghị na-agụ site gị TV? Gbalịa a ngwa na mfe ngwọta nsogbu oge ịse nsogbu a.
Achọtaghi gị ngwọta ma? Echegbula. Ị nwere ike ịjụ m ozugbo. M mgbe niile ebe a inyere gị aka.
Ọkachamara na-emeso mbipụta nile banyere media, ngwaọrụ na ndị ọzọ. Ụtọ nke electronic ngwaọrụ, nkà na ụzụ na pop omenala.
Wanna-abụ ọbịa nchịkọta akụkọ nke isiokwu a
na ịkọrọ gị ihe ọmụma na anyị?
Kpọtụrụ Anyị Ugbu a >>